Silica Fused, Quartz Fused, Quartz ntụ ntụ - Dinglong
Dinglong Quartz Limited bụ ụlọ ọrụ quartz na-emepụta ihe na-arụ ọrụ na Jiangsu China. Dinglong nọ na-eme nchọpụta ma na-emepụta ezigbo quartz ihe kemgbe 1987. Ngwaahịa a gụnyere silica fused, quartz fused, quartz powder, quartz tube na quartz crucible. Dinglong si quartz ihe na ngwaahịa na-n'oge-eji refractory, ngwá electronic, anyanwụ, foundry na ndị ọzọ pụrụ iche ngwa na-ekesa n'ime anụ ụlọ ahịa na esenidụt ahịa.
High-adị ọcha fused silica (99,98% amorphous) Dị na ma ntụ ọka na ọka iche vasatail ute ...
High-adị ọcha gwakọtara silica (99,98% amorphous) Low okpomọkụ mgbasa Njirimara nye elu kwes sh ...
High-adị ọcha gwakọtara silica (99,98% amorphous) Low thermal mgbasa mgbasa, agbanwe agbanwe chemist ...
Ngwaahịa Quartz a pụrụ ịdabere na ya bụ akpa dị mkpa maka ịmepụta monocrys ...
Lighting Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa quartz tubes maka ngwa ọkụ ma nwee ike mee m ...
High ọcha quartz ntụ ntụ (99.3% crystalline) High ekweghị ekwe nke 7 (Mohs) High chemical eguzogide L ...
Silica gwakọtara ọnụ bụ ngwongwo na-ejighị ihe akpọrọ ihe nke na-eme ka mmiri kpụ ọkụ n’ọnụ. Site na nguzogide ya na-ekpo ọkụ ọkụ dị ọkụ, a na-ejikarị ya eme ihe na-adịghị mma, dị ka ndị na-asacha aluminom ma ọ bụ ngwa ngwa nke cyclic.
Na itinye ego na nkedo, ejiri silica fused maka ụda olu ya. Fused silica nwere ọnụọgụ mmụba nke ikuku dị ala nke ukwuu yana enwere ike ịnwepụta ọgbụgba enwere ike iwepụ mkpụmkpụ dị mfe.
Ngwakọta silica anyị nwere nnukwu nrụgide eletriki na obere nrụpụta ọkụ, yabụ a na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ eletrọniki ka ọ na-ejupụta na epoxy ịkpụzi ogige maka ndị na-eduzi ọkara.
Ike n'ichepụta ikike
Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe.
Elu ngwaahịa mma
Inye ihe quartz nke ogo na oke bu ozi anyi. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Innovation Na-aga n'ihu
Dinglong kwenyere na ọhụụ na-aga n'ihu bụ ihe na-eme ka nzukọ na-aga n'ihu. N'ibi na ụwa nke na-agba ọsọ, anyị kwenyere na imeghari na ihe ọhụrụ ga - eduga n'ọdịmma dị ukwuu iji merie asọmpi ma nọrọ na ndị ahịa.
Inye ihe quartz nke ogo na uru.